Home / समाचार / घरमै बसबसि महिनामा लाखौँ कसरी कमाउने !
घरमै बसबसि महिनामा लाखौँ कसरी कमाउने ! 0
माथि उल्लेखित कार्यका साथै भच्र्युअल एसिस्टेन्टका रुपमा अरुको प्रुफरिडिङ, मार्केटिङ, रिसर्च, वेब डेभलपमेन्ट तथा डिजाइनजस्ता धेरै किसिमका काम गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न लेख–रचना लेखेर कन्टेन्ट राइटर बनि प्रशस्त आम्दानी गर्नेहरूको पनि ठूलै जमात छ । राम्रो भिडिओ खिच्न सक्नेहरूले केही सर्त पूरा गरेर युटुवबाट समेत राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् ।